Shilkii gaari ee ugu horreeyay ee iskiis u socda Apple | Wararka IPhone
Waxaan horeyba u ognahay in wali mashruuca gawaarida iswada ee Apple uu wali socdo inkasta oo la hadal hayo in shirkada ay joojisay mashruuca. Gawaarida Lexus waxay dhex wareegayaan Cupertino iyo hareeraheeda tan iyo sanadkii hore tijaabinta wadista iskeed u shaqeysa. Mid ka mid ah gawaaridaasina wuxuu ahaa halyeeyada shilka maalmo ka hor.
Waxay dhacday 24 Ogosto, waana ognahay faahfaahinta mahadsanid dhacdooyinka dhaca oo dhan waa in laga warbixiyaa mas'uuliyiinta awoodda u leh, markaa xaqiiqooyinkan aan la ogaan karin, aad ayey uga yar yihiin kiiska Apple iyo wadista iskiis u shaqeynaya.
Bishii Ogosto 24 markay ahayd 14:58 pm (waqtiga maxalliga ah), gaariga Apple ayaa gadaal laga garaacay isagoo isku dayaya inuu ku biiro jidka weyn, kuna socdaalayo 1 mph, isagoo sugaya farqiga u awooda inuu si nabadgelyo leh isugu milmo. Gaariga Lexus gadaal kaga dhacay wuxuu ahaa Nissan Leaf 2016 xawaare dhan 15mph. Nasiib wanaag (iyo xawaarahaas) waxaa jiray kaliya waxyeelo maadi ah mana jirin cid ka mid ah dadkii ku lugta lahaa shilka. In kasta oo gaariga Apple uu tijaabinayay darawal iskiis ah, laba qof ayaa gudaha u galay gaariga kuraasta hore. Marka laga eego sharaxaadda shilka, waxay umuuqataa in gaariga Apple uusan khalad ku laheyn dhacdooyinka waana qalad uu sameeyay gaariga gadaashiisa.
Wax yar ama waxba lagama yaqaan Mashruuca Titan oo tijaabinta iskeed u wadista gawaarida ee Apple ku socoto la ogyahay. Waxay unoqon kartaa horumarinta softiweer gaar ah soosaarayaasha kale ee gawaarida, ama Apple runti waxay qorsheyneysay inay soo gasho suuqa gawaarida si buuxda gawaarideeda, qaarbaa qiyaasaya in sanadka 2025. Waxa umuuqda inay dhowdahay waa gawaarida iswada ee gaarigaaga shaqaaluhu inay u dhexeeyaan xafiisyadaada Silicon Valley.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Shilkii ugu horreeyay ee iskiis u dhaca ee shirkadda Apple
Apple ayaa Bilawday Barnaamijka Beddelka Bilaashka ah ee iPhone 8s oo leh Dhibaatooyinka Motherboard-ka